Wararka - Haddii aan kugula talin lahaa kaliya hal shey oo daryeelka maqaarka ah, waxaan kugula talin lahaa subagga Shea oo aan libiqsi lahayn!
Haddii aan kugula talin lahaa kaliya hal shey oo daryeelka maqaarka ah, waxaan kugula talin lahaa subagga Shea oo aan libiqsi lahayn!
Noocyo kaladuwan oo noocyo kala duwan ah oo saameyn ku leh alaabada daryeelka maqaarka ayaa isku dayay inbadan, runta u sheeg calaamadda oo leh faraq aad u fog qiimaha sidoo kale ma lahan saameyn muuqata oo kala duwan.
Haweenku waxay iibsadaan alaabada daryeelka maqaarka, had iyo jeer "isku day", iyo niyad jab ku yimaada alaabta daryeelka maqaarka, laakiin ma yareyn karto hamigeenna ah inaan isku dayno noocyo cusub!
Malaha tani waa dabeecadda dumarka!
Laakiin Shea butter, saliid khudradeed dabiici ah oo leh waxyaabo fudud oo umuuqda mid fudud, waxay badashay qaabkii aan u eegay waxtarka alaabada daryeelka maqaarka.
Bal aan jaleecno waxa uu yahay subagga shea!
Shea butter waa nooc ka mid ah miraha dhirta duurjoogta ah ee Afrika boqollaal sano. Waa saliid khudradeed dabiici ah oo dabiici ah taas oo la soo saaray laguna uruuriyay habab farsamo oo gaar ah oo cusub.
Waxyaabaha ay ka kooban tahay ugu weyni waxay ka kooban yihiin noocyo kala duwan oo ah asiidh dufan oo aan dhereg lahayn, fitamiin C, midho acid, jilicsan oo adag ester acid, saliidda linseed iyo shaandhada qorraxda.
Qani ku ah nafaqooyinka, waxay saameyn gaar ah ku leedahay daryeelka maqaarka!
Waxay ahayd khiyaano qurux badan qarniyo Afrika waxaana hadda si ballaaran loogu isticmaalaa alaabada daryeelka maqaarka ee laga helo noocyada waaweyn ee adduunka.
Xarunta Qaranka ee Macluumaadka Bayoolajiyada ayaa daabacday daraasad muujineysa in subagga shea uu yahay il muhiim ah oo ka mid ah xeryaha ka hortagga bararka iyo bararka.
Daraasad kale, oo lagu daabacay Joornaalka Mareykanka ee Sayniska Nolosha, ayaa sheegatay in subagga shea uu kor u qaaday wax soo saarka kolajka isla markaana muujiyey astaamaha gabowga.
Maaddooyinka aan saponifiable-ga ahayn ee ku jira shea butter, 1-10 jeer oo saliidda cuntada caadiga ah, ayaa si deg deg ah ugu sameyn kara filim difaac ah dusha sare ee maqaarka, qoyaanka, saameynta ka hortagga qorraxda ayaa ah mid muhiim ah.
Sababtoo ah jilicsanaanta jilicsan, subagga shea wuxuu ku habboon yahay maqaarka xasaasiga ah, oo ay ku jiraan dhammaan noocyada maqaarka ilmaha iyo ilmaha, mid khafiif ah oo aan xanaaq lahayn. Isticmaalka dadka waaweyn, waxay ilaalin kartaa dabacsanaanta dabiiciga ah ee maqaarka.
Ku noolow woqooyiga waxay la kulmi doontaa hawo qalalan, maqaarka wajiga ayaa diidi doona ifafaalaha. Xaaladdan oo kale, shea butter waa xulasho ka fiican.
1. shaqada hagaajinta: baabi'inta nabarrada, godadka, sinnaanta, finanka, iwm.
Shea butter wuxuu leeyahay shaqeynta xoojinta dib u cusbooneysiinta unugyada maqaarka!
Waxay waxtar u leedahay dhaawacyada maqaarka iyo nabarrada ka dhasha finanka, qalliinka, gubashada, busbuska, nabarrada iyo jeexitaanka.
Waxay sidoo kale kala furfuraysaa madoobaadka, waxay yareysaa daloolada, waxay baabi'isaa baro casaan ah, waxayna saameyn gaar ah ku leedahay maqaarka aan sinnayn.
Dib-u-cusbooneysiinta unugyada awoodda leh iyo sifooyinka bogsashada ee subagga shea waxay gacan ka geystaan ​​koritaanka caafimaadka, maqaarka caadiga ah iyo beddelaadda unugyada nabarrada.
Ma aha oo kaliya inay dib u dhisto qaababka maqaarka ee dhaawacmay, laakiin sidoo kale waxay hagaajisaa midabka maqaarka iyo dabacsanaanta.
Subagga Shea wuu hagaajin karaa oo beddeli karaa unugyada maqaarka ee jeexan, wuxuu si wax ku ool ah u yareyn karaa muuqaalka astaamaha atrophic, wuu yaraanayaa si loo baabi'iyo calaamadaha fiditaanka, wuxuuna maqaarka u siinayaa midab dhexdhexaad ah.
Waa cadaalad in la yiraahdo subagga shea wuxuu xallin karaa ku dhowaad dhammaan dhibaatooyinka maqaarka ee caadiga ah!
2. Maqaarka oo adkeeya iyo laalaabidda maqaarka: ka hortag gabowga maqaarka
Subagga Shea wuxuu wanaajiyaa cusboonaysiinta maqaarka iyo cusboonaysiinta iyada oo kicinaysa waxqabadka unugyada epidermal, sidaas awgeedna loo joojiyo loona beddelo astaamaha astaamaha u ah gabowga maqaarka sida laalaabkii, laalaabkii indhaha ku wareegsanaa iyo maqaarkii oo lulaya!
Maaddaama ifka gabowgu sii dhammaanayo, maqaarka wajiga ayaa noqonaya mid siman oo adag.
3.Whitening function: yaree midabaynta, baraha cilladaha, kana saar wareegyada indhaha ee mugdiga ah
Subagga Shea wuxuu kor u qaadaa awooda maqaarka si uu ugu soo baxo unugyo cusub, wuxuu yareeyaa midabka maadama unugyada cusub badaleen kuwii hore.
Subagga Shea wuxuu sidoo kale yareyn karaa dhibcaha maqaarka ee sababa qorraxda iyo uurka, wuxuu hagaajin karaa maqaarka gubta, wuxuu yareyn karaa dhibco madow iyo cillado, wuxuuna soo celin karaa maqaarka jilicsan iyo midka cad.
4.U mari agagaarka indhaha sidoo kale wuxuu si wax ku ool ah uga saari karaa wareegyada mugdiga ah.
Shaqada qoyaanka nafaqada: u qoyaan maqaarka qalalan markale
Maqaarkaagu wuxuu soo saaraa 10 jeer ka saliid yar 40-ka iyo 50-ka sano marka loo eego 20-ka sano. Tani waxay u horseedi kartaa qallayl, fuuqbax iyo duuduubnaan sababtoo ah soo saarista saliidda oo yaraata iyo luminta haynta qoyaanka.
Subagga Shea wuxuu dib u soo celiyaa isku dheelitirka ugu wanaagsan ee u dhexeeya asiidh dufan iyo biyo wuxuuna u soo celiyaa qoyaanka maqaarka qalalan.
Aad u fiican in la ilaaliyo qoyaanka maqaarka, firfircoonaanta unugyada, si sahlan loo dhex geli karo lakabka maqaarka, qoyaanka iyo jilicsanaanta maqaarka.
5. Daryeel timahaaga
Waxay dib u soo celisaa bilicsanaanta iyo dabacsanaanta dabiiciga ah ee timaha, iyadoo si wax ku ool ah u hagaajineysa muuqaalka iyo muuqaalka timaha ay waxyeeleeyeen tinctures, midabaynta, qalajinta, qallajinta qorraxda iyo walxaha kale ee deegaanka u xun.
Qofka maqaarka dufanka leh ma isticmaali karaa subagga shea?
Rumayso in dhibaatadani ay wareerineyso qofka maqaarka badan ee saliida leh, adoo fiirinaya saameynta sixirka leh ee noocyada saliida oo dhan ee maqaarka ilaaliya, laakiin walwal walboo "saliid aad u badan" dib u gaabiyo.
Tani waa fikrad khaldan oo daryeelka maqaarka ah!
Dhab ahaan, waxa loogu yeero maqaarka saliida leh wuxuu siiyaa saliid badanaa maxaa yeelay maqaarku kamaqan yahay wuxuu ubaahanyahay "dufan" meesha ayaa sababtay!
Saliidu waa qayb muhiim ah oo maqaarka ka mid ah, haddii maqaarku saliid la'aana, qalalan, laalaab iyo dhibaatooyin taxane ah ayaa dhici doona.
Qofka maqaarka saliida leh qaarkood wuxuu aadayaa saliid iyo maqaar saafi ah oo xad dhaaf ah, wuxuu sababayaa saliid aad iyo aad ufiican badalkeeda, tani waa sababta sababta oo ah dufanka kuma filna maqaarkuna wuu isqarin karaa.
Haddii dadka leh maqaarka dufanka leh ay si wanaagsan u isticmaalaan waxyaabaha daryeelka maqaarka ee dufanka leh si ay u kabaan saliidda uu u baahan yahay maqaarku, waxay xakameyn karaan ifafaalaha dheecaanka saliidda maqaarka ee xad-dhaafka ah.
Marka, dadka leh maqaarka saliida leh waxay isticmaali karaan subagga shea.
Si kastaba ha noqotee, marka la barbardhigo maqaarka dhexdhexaadka ah iyo qalalan, waxaa lagula talinayaa in isticmaal kasta uusan ka badnaan cabirka miraha soybeerka, ama lagu qasin waxyaabaha kale ee maqaarka lagu daryeelo si loo isticmaalo saameynta sidoo kale waa mid aad u wanaagsan.
Farsamaynta Isticmaalka Shea Butter
Ugu dambeyntiina, waxaan soo koobayaa talooyinka laga yaabo inaadan ka ogeyn isticmaalka saliidda shea si aad u labanlaabto saameynta!
1. Hubso inaad ku dhacdo timirta oo aad xoqdo si aad u kululeyso: nadiifinta ka dib, ugu horreyn daub toner, ka dib ku rid timirta cabbitaanka soya ee cabitaanka saliidda ah, ku xoq kuleylka, ka dibna wajiga duug!
Xusuusnow inaadan si toos ah u codsan wejiga, maxaa yeelay way fududahay in la mariyo qaddarka maxalliga ah ee aan sinnayn ee ay sababtay dhacdooyinka aadka u badan iyo finanka dilaacay.
Kulayl ku xoq calaacasha gacantaada kuna mari mari wajigaaga oo dhan, taas oo si wax ku ool ah uga fogaan karto xaaladdan.
2. Hubso inaad isticmaasho duugis: Dad badan ayaa laga yaabaa inay wajiga uun ku marsadaan subagga shea waxayna u maleynayaan inay wax walba hagaagi doonaan.
Xaqiiqdii, nooc kasta oo saliid ah wuxuu ilaaliyaa maqaarka waa inuu lashaqeeyaa duugista kadibna awood u yeeshaa inuu helo natiijo aad u wanaagsan.
Duug 1-2 daqiiqo markasta.
Duugistu waxay kor u qaadi kartaa wareegga dhiigga maqaarka, si wax ku ool ah u xoojisaa saameynta nuugista subagga shea!
3. Ku mari tuwaal kulul si aad u labanlaabto saameynta!
Ka dib markaad ku dhajiso subagga shea iyo duugista wajigaaga tuwaal kulul illaa 1-2 daqiiqo, waxay kaa caawin doontaa furitaanka daloolada iyo xoojinta nuugista!
Intaas ka dib, ku mari cadaadin qabow tuwaalka biyo qabow si aad uga caawiso xirida daloolada!
Waad la yaabi doontaa markaad ogaato in maqaarkaagu cas yahay oo jilicsan yahay!
Waxay u egtahay sidii aan uga soo baxay xarun qurxinta lagu qurxiyo!
Hadaadan i rumaysanayn, iskuday!
4. Dhig saliidaha kale ee lagama maarmaanka ah si aad u wada isticmaasho: Shea butter waa saliida salka u ah. Waad wada geyn kartaa saliidaha kale ee muhiimka ah si waafaqsan dareenkaaga, saameyntuna sidoo kale waa mid aad u wanaagsan.
Tusaale ahaan, kudar dhawr dhibcood oo ah saliida lagama maarmaanka u ah subagga shea, taas oo waxtar badan u yeelan karta gabowga iyo maqaarka cas.
Ku dar saliida lavender ama geedka shaaha saliida lagama maarmaanka ah si loola dagaallamo finanka.
5. Isticmaal kahor sameynta maaskaro: dad badan ayaa si toos ah u mariya maaskarada nadiifinta kadib. Xaqiiqdii, habka saxda ah waa in la adeegsadaa tanarka marka hore nadiifinta ka dib, ka dibna la mariyo nuxurka, oo ugu dambeyntii la mariyo maaskaro!
Tallaabada dheecaanka nuxurka waxaa lagu beddeli karaa subagga shea, mar dambe kor u kac markale codso maaskaro wajiga ah, waad layaabi kartaa daahfurnaan la yaab leh, saameynta qoyaanka ee maaskaro wajiga ayaa laban laaban karta, maqaarku wuxuu soo saaraa qurxinta biyaha, weli wuu ka buuxsami karaa dareen gubasho leh!
Kani waa maaskaro kaliya ee aan lagu guuleysan karin saameynta!
Subagga Shea wuxuu cajaa'ibyo u sameeyaa maqaarkaaga!
Ka dib isticmaalka bil 1 si aad u dareento isbeddelada muuqda ee tayada maqaarka!
Ma dareemayo dareemo badan oo ku saabsan caddeynta, laakiin hagaajinta dhibaatooyinka maqaarka wajiga, saameyntu waa mid muhiim ah: calaamadaha finanka, dhibco, si tartiib tartiib ah ayey u libdhi doonaan isticmaalka waqtiga!
Dareenka ugu weyn ee habka isticmaalka waa: maqaarku wuxuu si gaar ah u noqonayaa mid jilicsan, jilicsan oo dhalaalaya.
Waxaa lagula talinayaa dhammaan haweenka raadinaya quruxda, iyadoon loo eegin da'daada ama xaaladda maqaarkaaga, Shea butter waa wehelka daryeelka maqaarka ee ugu habboon.
Shea taxanaha jirka subagga:
1.Shey kareemka gacanta gacanta, 75g
7 maalmood oo ah ka hortagga maqaarka oo wanaagsan
8 saacadood oo qoyaan ah, nuugid deg deg ah
Duulaanka dibedda, dhibaatooyinka muruqyada halista ah: cimilada qalalan iyo kuwa qabow, diirka qallalan, nadiifinta xad dhaafka ah, guduudashada xasaasiga ah, qorraxda oo si isdaba joog ah u socota, khadadka ganaaxa.
Sida loo dalbado alaabada qoyaanku waxtar ma leh! Sababtoo ah, caqabadda maqaarkaaga ayaa la wax yeeley!
Maqaarka waxyeelloobey wuxuu u horseedi karaa biyo xawaare ku socda, dhaawaca dibadda ayaa ka qoto dheer.
Maqaarka leh ka hortagga carqaladda ayaa ka hortagi kara qoyaan luminta, iska caabbinta ku-xadgudubka bannaanka.
Waxay kaa caawineysaa inaad dayactirto caqabadda maqaarka 7 maalmood.
Qani ku ah walxaha aan la sheegi karin, waxay dib u buuxin kartaa isdhaafsiga unugyada, si qoto dheer ayey u nafaqeysaa una dayactirtaa, u ilaalisaa baruurta jirka.
Waxaa ka buuxa fitamiin E, oo ah antioxidant awood badan.
2.Shea Butter Body Looshin, 30g / 50g / 100g
Ku habboon maqaarka caadiga ah + maqaarka qalalan
Qoyaan, nafaqeyn iyo dufan la’aan 48 saacadood
3.Shey kareemka qorraxda qorraxda, 30g / 50g
Lagu dabaqi karo alaabada qorraxda iyo waxyaabaha dayactirka qorraxda kadib
4. Shaambooyada subagga iyo hagaajiyaha timaha, 30g / 50g / 100g / 200g / 250g
Shaambooyada nafaqada leh iyo qaboojiyaha timaha qalalan, badeecada daryeelka timaha ka dib dheecaan ka dib
5.Saraam wajiga subagga, 30g / 50g
Ku habboon badeecadaha ka hortagga gabowga, kareemka habeenkii, maqaarka xasaasiga ah iyo alaabada daryeelka maqaarka qalalan, alaabada xilliga qaboobaha
Ku habboon ciribta jilicsan iyo maqaarka cagaha.
6. Maaskarada dibnaha ee shaaha, 30g / 50g
Ku habboon nafaqada bushimaha iyo ugu badnaan.
7.S cream kareemka ilmaha subagga, 30g / 50g
8.Shea aasaaska dareeraha subagga, 30g / 50g
Waxay yareysaa muuqaalka xariiqyada ganaaxa ah waxayna wajigaaga u badashaa shiraac aan iin lahayn oo siman sidaa darteed qurxinta waxay u socotaa si siman dhamaadka dheer.
9.Sheyda xoqida dibnaha subagga, 30g / 50g
Dibno xoqid sifeyn dabacsan oo nafaqo leh
10.Shey cagaha lugta xoq, 30g / 50g
Xoqidda cagaha jilicsan ee nafaqada leh
11.Smaajada cagaha subagga, 30g / 50g